Wakiilka Q.M James Swon oo ku cadaadinaya Soomaaliya iney wadahadal kala gasho Kenya muran badeedka – Somali Top News
Wakiilka Q.M James Swon oo ku cadaadinaya Soomaaliya iney wadahadal kala gasho Kenya muran badeedka
Wakiilka dhawaan loo soo magacaabay Soomaaliya ee Qaramada Midoobay James Swon ayaa magaalada Washigton ee dalka Mareykanka kula kulmay wakiilka Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay Danjire Abuukar Cusmaan Baale.
Qaramada Midoobay oo garab siineysa Dowladda Kenya ayaa Soomaaliya u sheegtay in nabadda gobalka ay ku jirto iney Soomaaliya ka tanaasusho muranka gardarrada ah ee Kenya kuwado Soomaaliya.
James Swon oo wali aan ka shaqo bilaabin xafiiskeeda Soomaaliya ee UNSOM ayaa shaqadiisa koobaad ka dhigtay xalinta dacwadda Soomaaliya iyo Kenya u taala maxkamadda Caalamiga ah ee ICJ.
War shaalay ka soo baxay Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in sidoo kale in kalafadhiga guud ee Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay lagu daray Ajande ah ka doodista muran badeedka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Dowladda hadda jirta ee Soomaaliya oo ay hogaaminayaan Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’isul Wasaare Kheyre hadii ay dadaalkooda ku bixiyaan sidii ay Soomaaliya xaqeeda u soo dhicin laheyd waxaa hubaal ah in iyaga dib loo dooran doono doorashada 2020, madaama ay ka soo gudbeen wadooyin adag.
Kenya ayaa dooneysaa in dalalka gobolka ee xiriirka ka dhexeeyo inay soo dhexgalaan xallinta muranka sii loo afjaro ismari waaga diblumaasiyadeed.
Soomaaliya ayaa u muuqtaa mid ka aamusan khilaafka , waxay ka dhuursugaysaa go’aanka kasoo bixi doono maxkamadda Caddaallada Adduunka ee ICJ.
← Kenya oo wada olole xoog leh oo Soomaaliya ay kaga guuleysaneyso muranka Badda
Madaxweyne Farmaajo iyo Gudoomiyaha Baarlamanka Hirshabelle oo kulan yeeshay →
Howlgallo dad lagu soo qabqabtay oo laga sameeyay magaalada Baladweyne
Danjire Nicholas Haysom iyo Gudoomiyaha Aqalka Sare oo kulmay
Shirka Garoowe oo si habsami leh u socda iyo Madaxweyne Farmaajo oo dar-daarmay